Ramoji ရုပ်ရှင်ပွဲတော်စီးတီးအတွက်စက်တင်ဘာလများအတွက် Indywood ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပွဲတော်ကြီးသတ်မှတ်မည် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Ramoji ရုပ်ရှင်ပွဲတော်စီးတီးအတွက်စက်တင်ဘာလများအတွက် Indywood ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပွဲတော်ကြီးသတ်မှတ်မည်
ရုပ်ရှင်ရုံများ၏အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအခမ်းအနား 10K ရုပ်ရှင်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တိုင်းပြည်ရဲ့ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးထွားရန်ရည်မှန်းချက်ကြီး, $4ဘီလီယံအထိအစီအစဉ်၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ 2nd နှစ်ပတ်လည် Indywood ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပွဲတော်ကြီးအစဉ်အိန္ဒိယတွင်ထုတ်လုပ်ရုပ်ရှင်၏အကြီးဆုံးအခမ်းအနားများအတွက် Beverly Hills, Calif. -အစီအစဉ်များကို Beverly Hills မှာရှိတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုရုပ်ရှင်ရုံဖြစ်ရပ် 100 နိုင်ငံများထက် ပို. အနေဖြင့်ကမ္ဘာကြီး Premiere ရုပ်ရှင် featuring, အားလုံးအလင်းများအိန္ဒိယနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်များပါဝင်သည်တော်မူမည် နှင့် Indywood ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Market က, အိန္ဒိယရဲ့ Premiere ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရုပ်ရှင်စျေးကွက်; အဖြစ်ညီလာခံ, panel ကဆွေးနွေးမှုများနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲရုပ်ရှင်ရုံများအတွက်ကမ္ဘာ့အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာစျေးကွက်အာရုံစူးစိုက်။ အဆိုပါပွဲတော်ကြီးရုပ်ရှင်ရုံ, Telangana ၏ပြည်နယ်အစိုးရများကထောက်ပံ့ထားခြင်းနှင့်ပြည်နယ်သီရိ K သည် Chandrashekar Rao က၏န်ကြီးချုပ်အားဖြင့် patronized စက်တင်ဘာလ 24 ကျင်းပလိမ့်မည် - Ramoji ရုပ်ရှင်ပွဲတော်စီးတီး, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘက်ပေါင်းစုံရုပ်ရှင်စတူဒီယိုရှုပ်ထွေးမှာ 27 ။ ကော်ပိုရိတ်မိတ်ဖက် KFC, BMW ကား, Pepsi, Qube, တာတာတို့ပါဝင်သည်။
အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် Sohan ရွိုင်း SK ကို, အ Indywood ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပွဲတော်ကြီး၏တည်ထောင်သူနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးများကအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ မစ္စတာရွိုင်းတစ်ဦးတကမ္ဘာလုံးကျော်ကြားဖြစ်ပါသည် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ဒူဘိုင်းအခြေစိုက် Aries Group ၏ CEO ။ ဒါ့အပြင် Satish Chandran, Aries Group မှဂျွန် Dohm, အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌ, စစ်ဆင်ရေး, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အိုင်တီ, ရီးရဲလ်: D နှင့် Greg Agostinelli, ဒုတိယသမ္မတ, EPICA ၏အလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဌတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခဲ့ကြသည်ယူပြီး Los Angeles မြို့.
အဆိုပါ Indywood ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပွဲတော်ကြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအဖြစ်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်နိူးထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးဆွဲရန်မျှော်လင့်နေသည်။ "ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာ entries တွေကိုတစ်ခုခင်းကျင်းအတူ cineastes ပိုင်းခြားများအတွက်ကြွယ်ဝတဲ့အမြင်အာရုံအားရစရာကတိပေးထား," ရွိုင်းကဆိုသည်။ "ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းစိတ်အားထက်သန်အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူဤသမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်များအဘို့, ပွဲတော်နှင့်ဆက်စပ်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်စျေးကွက်ဖြည့်ဆည်းရန်စံပြပလက်ဖောင်းကိုထောက်ပံ့ပေး, ကွန်ယက်, အပေးအယူစေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ဒဏ်ခတ်။ "
အဆိုပါပွဲတော်ကြီးဟာ Indywood စီမံကိန်း, အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြပွဲကြီးထွားရန်ရည်မှန်းချက်ကြီးအစီအစဉ်အဘို့ကုလားကာ raiser အဖြစ်ရွိုင်းအားဖြင့်ပဋိသန္ဓေယူတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက $ 10 ဘီလီယံအထိစီမံကိန်းကို 2000 ကော်ပိုရိတ်ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်အိန္ဒိယဘီလျံနာမောင်းနှင်နေသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ, 10,000 4K multiplexing ဖန်သားပြင်၏ပစ်လွှတ်အပါအဝင်လာမယ့်ငါးနှစ်အတွင်းမှာရုပ်ရှင်စတူဒီယို, ကာတွန်း / အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအဆောက်အဦများနှင့်ရုပ်ရှင်ကျောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတစ်ခုလုံးကိုရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အိန္ဒိယတွင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုကြီးထွားဖို့ဆက်လက်ပေမယ့်လည်း "က၎င်း၏ပြဇာတ်ရုံတက်ရောက်သူ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှယ်ယာမကြာသေးမီနှစ်အတွင်း 32% ကနေ 40% အထိလျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ အိန္ဒိယစားသုံးသူတိုင်းပြည်၏ရုပ်ရှင်ရုံများ၏အရည်အသွေးမမီတဲ့အခွအေနေကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်ရုပ်ရှင်နှင့် 4K အကြောင်းအရာတွေ့ကြုံခံစားဖို့သေးရှိသည်, "ရွိုင်းလေ့လာသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်နှင့်အတူတန်းတူဖြစ်, သို့မဟုတ်ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာထက်ကျော်လွန်ရန်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းခြီးမွှောရည်ရွယ်သည်။ "
အဆိုပါအပေါင်းသည်အလင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော် features တွေ, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, ဘောင်းဘီတိုနှင့်အသစ်ဒါရိုက်တာများများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအမျိုးအစားများပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်လိုင်း-up, အမေရိကန်, အိန္ဒိယ, ပြင်သစ်, အီတလီ, ပိုလန်, အာဂျင်တီးနား, အစ္စရေး, ယူကရိန်း, မလေးရှား, တူရကီနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကနေကမ္ဘာကြီးကို Premiere ရုပ်ရှင်ပါဝင်သည်။
Indywood ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Market ကအိန္ဒိယစျေးကွက်ရယူဖို့ကြိုးစားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်အဘို့နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူးရှာကြံအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဘို့နှစ်ခုလုံးဟာဝန်ကြီးချုပ်ကုန်သွယ်မှုစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးကွက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးဝယ်ရောင်းပြပွဲနှင့်သူတို့၏အကြောင်းအရာဆောက်ရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းများကိုအမျိုးမျိုးပေးစွမ်းသည်။
"သူတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမာခံမှာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူ့စေသောအရာကိုမျှဝေအဖြစ်အလတ်စားပြောပြမယ့်ပုံပြင်အဖြစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပိုမိုနီးကပ်စွာအတူတကွလူမြိုးအပေါငျးဆောင်တတ်၏," Agostinelli ကဆိုသည်။ "မစ္စတာ။ ရွိုင်းရဲ့ Indywood ပွဲတော်ကြီးဒီမျိုးဆက်များအတွက်ရုပ်ရှင်-goers, စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, အနုပညာရှင်များနှင့်လက်သမားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ပိုပြီးအရေးကြီးလာမည့်ဖို့စိတ်နှလုံးတို့ကိုတစ်ဦးလာမယ့်-အတူတကွဖြစ်၏။ "
Indywood ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပွဲတော်ကြီးကြောင့်ရုပ်ရှင်ရုံကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့။ 24, 27 - Hyderabad တောင်ပိုင်းအိန္ဒိယသမိုင်းဝင်မြို့နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအချက်အချာစက်တင်ဘာ 2016 ထံမှ Indywood ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပွဲတော်ကြီး၏ဒုတိယထုတ်ဝေများအတွက်အနီရောင်ကော်ဇောထွက်လှိမ့်ပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာ၏ဤအဆုံးစွန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Ramoji မှ 3000 နိုင်ငံတွေ, ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များနှင့်စီးပွားရေးအကြီးအကဲများ, လုပ်ငန်းရှင်များ, ရုပ်ရှင်သတင်းထောက်များနှင့်မီဒီယာကျွမ်းကျင်သူများ, စက်မှုလုပ်ငန်း Aspire နှင့်ရုပ်ရှင်နိူးထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကျော်ကနေရှိသမျှသောလောကီထောင့်ကနေ 10,000 ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် 75 footfalls ကျော်ဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မည် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်စီးတီး-ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရုပ်ရှင်စတူဒီယိုနှင့်ပွဲတော်ပူးတွဲအိမ်ရှင်။
“ Café Society” အရောင်အသွေးစုံသည့် Anthony Raffaele သည်နယူးယောက်၊ - နိုဝင်ဘာလ 21, 2019
Periscope Post & Audio ဖြည့်စွက်အကြီးတန်းအရောင်အသွေးစုံ Kevin Kevin Kirwan - နိုဝင်ဘာလ 20, 2019
Toluca ရေကန်ရှိ Waterman Sound စတင်သည် - နိုဝင်ဘာလ 20, 2019
ယခင်: Bon Ikan မှတစ်ဆင့်အခုတော့သီးသန့်ရရှိနိုင်စောင့်ကြည့်။
နောက်တစ်ခု: NAB Show မှာ Vidcheck